Ingiriiska oo ku jira xasarad shaqaale & kumannaan shaqo oo wax qabta la la’yahay (Halkan kala xiriir) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Ingiriiska oo ku jira xasarad shaqaale & kumannaan shaqo oo wax qabta...
Ingiriiska oo ku jira xasarad shaqaale & kumannaan shaqo oo wax qabta la la’yahay (Halkan kala xiriir)
(London) 26 Sebt 2021 – Ilaa 10,500 oo ajaanib ah oo isugu jira darwaliinta gawaarida xamuulka ah iyo shaqaalaha kawaannada ayaa loo oggolaan doonaa in ay shaqo u tagaan UK ilaa dabayaaqada sanadkan, oo ku beegan marka ay billaabaneyso ciidda masiixiyiinta.
Shaqaalaha loo baahan yahay waxaa ka mid ah dadka kawaanleyaasha ah ee jarjara hilibka digaagga (Reuters)
Ma tahay darawal kaxeeya gawaarida waaweyn ee xamuulka ah? Xogta ku saabsan khibraddaada kusoo dir email’kan [email protected].
Waxaad sidoo kale nagula soo xiriiri kartaa qaababkan:
Previous article”Ma waxaan sugaynaa inta kulligeen nala dilayo!” – Su’aal ay qabtey Hibaaq Abuukar oo shalay lafteeda la diley!
Next article”Dad baa qas la maaggan!” – Somalia oo loo jeediyey inay ka digtoonaato xilliga xasaasiga ah ee lagu beegay go’aanka ICJ